I-Semalt inikeza izinhlobo eziyinhloko zama-Filter ogaxekile we-imeyili Okufanele Uzame
Igor Gamanenko, i-10 (Semalt iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende, ithi okwamanje ugaxekile ube yigama lomndeni, futhi amaphesenti angaphezu kwangu-80 azo zonke izimoto ze-imeyili ayinalutho futhi ayinalutho. Kusho ukuthi ukuxhumana okusebenzayo nge-imeyili akunakwenzeka ngaphandle kokuvikelwa kogaxekile. Phakathi naleso sikhathi, i-imeyili yokuthengisa engacelwe (UCE) umyalezo ongenawo umshini wedijithali ubizwa nangokuthi ugaxekile. Kwezinye izimo, akusizi ngalutho neze futhi akubangeli izinkinga, kepha ngezinye izikhathi kungangenisa amakhodi ezinonya nama-virus kokubili kwikhompyutha yakho kanye newebhusayithi. Uma ucabangela inombolo enkulu yama-imeyili ethunyelwe emhlabeni wonke, kufanele ugcine isohlwini lwe-imeyli yogaxekile bese uzama bonke ukuthola okuhlangabezana nezidingo zakho - pale al soffitto.
Isihlungi sokugaxekile sabantu abadala:
Ukugaxekile kokuqukethwe kwabantu abadala kungenye yezinhlobo ezivame kakhulu ze-imeyli ogaxekile futhi isihlungi esisetshenzisiwe sabizwa nangokuthi isihlungi sokugaxekile esikhulile. Ngezinye izikhathi abaduni nabagaxekile baheha abasebenzisi ngemikhiqizo nezinsizakalo ezenzelwe ukwandisa amandla wezocansi. Bashiya ama-backlink kumawebhusayithi wabo we-porn noma izikhangiso futhi bafuna ukukhuthaza lezi zinto kwi-intanethi. Iminyaka embalwa, abantu sebeqale ukudala ukuhlunga kogaxekile wokuqukethwe omdala..Ukwakha isihlungi esinjalo, kufanele uhambe endaweni yokuhlunga yekheli lakho le-imeyili, udale isihlungi bese wengeza i-URL kusayithi lomdala eliye lakucasula okwesikhashana.
Izihlungi zogaxekile zezeMpilo neMithi:
Lolu hlobo lwemifanekiso yokuhlunga i-imeyili luzuzisa amawebhusayithi kanye nabathumeli ukukhangisa imikhiqizo yokulahlekelwa kwesisindo, ukwelashwa kwekhanda, imithi yokwenza ngcono isimo, imithi engeyona yendabuko kanye neyaseShayina, kanye nezithako zokudla. Uma unayo iwebhusayithi, ungafaka i-plugin efanele ye-WordPress ukuvimbela logaxekile. Futhi uma ngabe uthola lezi zinhlinzeko ezikhohlisayo ku-imeyili yakho, kufanele umane udale isihlungi bese wengeza lawo ma-ID kulesi sihlungi ukuvimbela ukuba bangakuthumeli imiyalezo ecasulayo esikhathini esizayo.
Izihlungi zogaxekile zezombusazwe:
Ugaxekile lwezombangazwe lusakazeka ngendlela yokwesatshiswa kwezombusazwe kanye nemisebenzi yokwenza izinto. Ama-Extremists, amaphekula, nabaduni bahileleka ekusakazeni le spam kwi-intanethi. Bangabantu abanomqondo omubi futhi bahloniphi izindinganiso zabantu. Yingakho beqhubeka bethumela ama-imeyili we-spammy usuku lonke futhi abakhathaleli ngemigomo yokuphepha noma yokuphoqelela umthetho. Izihlungi zogaxekile zezombangazwe zilula ukudala, futhi zingakusiza ukuqeda lama-imeyili asolisayo, izinsongo ezingase zibe khona, kanye nezingozi zokulahlekelwa imali yakho.
Kuyiqiniso ukuthi ugaxekile, ama-virus, i-malware nama-imeyili angenalutho kuyisongo esikhulu kubasebenzisi be-intanethi. Abaqaphi nabagaxekile basebenzisa amasu ahlukene ukuze basicasule futhi bathe imali yethu. Uma ungazange udale noma yikuphi ukuhlunga kwama-imeyili anjalo, kufanele uhlale kude nama-imeyili angafuneki angafaka izipesheli zebhizinisi ezingekho emthethweni, izimpendulo ezizenzakalelayo, ama-virus, i-malware, nayo yonke inhlobo yogaxekile engabangela izinkinga ezinkulu. Ngendlela eyodwa noma enye, i-imeyili ogaxekile kuyinkinga enkulu, kepha izihlungi zikhona lapho ukuxazulula iningi lezinkinga zenzeka kwi-intanethi.